युवाको ढुकढुकीमा बसिन् परी
सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा बुवा महेन्द्र साह र आमा शिवु कुमारी साहको कोखबाट जन्मिएकी १९ वर्षीया कलाकार परी साह छोटो समयमा नै मैथिली दर्शकहरूको माझ चर्चित भएकी छन् ।
आशा भोस्ले नेपाल आउने
काठमाडौं, ८ पुस । साधना कला केन्द्र पुतलीसडकको निमन्त्रणामा भारतकी प्रसिद्ध गायिका आशा भोस्ले नेपाल आउने भएकी छिन् ।
सलमानको जन्मदिनमा नेपालको बिइङ ह्युमनको बिशेष अफर
काठमाडौं, ८ पुस । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको जन्मदिनलाई लक्षित गरेर बिइङ ह्युमन क्लोथिङ नेपालले नयाँ स्किम सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतका अमिताभ बागचीलाई डिएससी पुरस्कार
काठमाडौं, १ पुस । दक्षिण एसियाली साहित्यकै सर्वोत्कृष्ट एवं गरिमामय डिएससी पुरस्कार भारतीय लेखक अमिताभ बागचीको ‘हाफ द नाइट गन’लाई प्रदान गरिएको छ ।
‘कोलकता अन्तर्राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव’ मा नेपाली नाटक मञ्चन
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाली बालनाटक ‘करेसा कन्सर्ट’ को पहिलो मञ्चन भारतको ‘कोलकता अन्तर्राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव’मा भएको छ ।
भारत रंग महोत्सव थिएटरमा नेपाली नाटक
काठमाडौं, १२ मंसिर । नाटक भारतको नयाँ दिल्लीमा सन् २०२० मा हुने भारत रंग महोत्सव थिएटर फेस्टिवलमा दुईवटा नेपाली नाटक मञ्चनका लागि छनोट भएका छन् ।
सात समुद्र पारी मनाइयो महापर्व छठ
काठमाडौं, २६ कार्तिक । सात समुद्र पारी अमेरिकाको हाड जमाउने जाडोमा लोक आस्थाको महापर्व छठ मनाइएको छ ।
जनकपुरमा सामा–चकेवाको प्रदर्शनी
जनकपुरधाम, २६ कार्तिक । भाई–बहिनीबीच मायाको प्रतिकको रुपमा मनाइने मिथिलाको सांस्कृतिक पर्व सामा–चकेवा लोपन्मुख अवस्थामा प्रायः पुगिसकेको छ ।
काठमाडौं, ९ कार्तिक । आयरल्याण्डका नागरिक प्राध्यापक डाक्टर दइथी ओ मर्क्युले नेपालको कला पत्थर क्षेत्रमा एल्ट्रा म्याराथनमा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने भएका छन् ।
धनुषाका गायक विश्वकर्मा ‘सर्वोत्कृष्ट कल्चर’ अवार्डबाट पुरस्कृत
धनुषा, २७ भाद्र । धनुषाका चर्चित गायक रुद्रसेन विश्वकर्मा सर्वोत्कृष्ट कल्चरल गीत अवार्डबाट पुरस्कृत भएका छन् ।
मैथिली संस्कार गीत प्रतियोगिता सम्पन्न
जनकपुरधाम, २ भदौ । मैथिली महिलाको समूहका रुपमा रहेको सखी बहिनपाले आफ्नो वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा शनिबार मैथिली संस्कार गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो ।
वीरगन्जमा फिल्म महोत्सव हुने
वीरगन्ज, ३१ साउन । वीरगन्जमा फिल्म महोत्सव हुने भएको छ । असोज १ देखि वीरगन्जमा फिल्म महोत्सव को आयोजना हुने भएको हो ।
सिरहाका युगल जोडीले ल्याए ‘सुन न यो दिलको कुरा’ म्युजिक भिडियो
सिरहा, १५ साउन । सिरहा गोलबजारका नवयुगल जोडी शान्ति सदा र गुरुशरण सदाको नयाँ नेपाली गीत ‘सुन न दिलको कुरा’ नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
काठमाडौं, १५ साउन । बंगलादेश–नेपाल मित्रता कला प्रदर्शनी मंगलबार काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलको प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको छ ।
दर्शक–श्रोता नेपालको साधारणसभा सम्पन्न, अध्यक्षमा सन्तोष बजगाँई
काठमाडौं, ११ साउन । दर्शक–श्रोता नेपालको दोस्रो अधिवेशन तथा चौथो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । नयाँ कार्यसमति चयनसंगै सो दोस्रो अधिवेशन तथा चौथो साधारण सभा शनिवार सम्पन्न भएको हो ।
नमस्ते मेहेन्दी महोत्सव : यसरी गरिँदैछ श्रावणको स्वागत
काठमाडौं, ३० असार । नेपाली संस्कृतिको विशिष्ट चिनारी बोकेको श्रावण महिनाको सुरुआत विशेष बनाउन ‘नमस्ते मेहेन्दी महोत्सव’को आयोजना गरिने भएको छ ।
भारतीय रियालिटी सोमा नेपाली बाल प्रतिभाको धमाका
काठमाडौं, २१ जेठ । भारतीय गायन रियालिटी सो सारेगमपमा नेपाली बाल प्रतिभाले धमाका मच्चाएका छन् । नेपाली बाल गायक आयुष केसी र प्रितम आचार्य सारेगमपको फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । फाइनलमा ६ जना प्रतिस्पर्धीबीच गायन प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
सलमान र कट्रिनाले गरे नेपाली प्रितमको प्रशंसा
काठमाडौँ, १३ जेठ । भारतीय टेलिभिजनको चर्चित रियालिटि शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’ सुपर ६ का लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली बालक प्रितम आचार्यको बलिउड अभिनेता सलमान खानले प्रशंसा गरेका छन् ।
काठमाडौं, ७ जेठ । बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कड आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि पहिलो पटक काठमाण्डौ आउने भएकी छिन् ।
को मधेशी को पहाडे ? आहाँ त हमर मिता...
काठमाडौं, २४ बैशाख । राजनीतिक वृतमा भनिने गरेजस्तै मधेशी र पहाडे समुदायबिच विभेद छ त ? के साँच्चै अझै पनि दुई समुदायबिच पानी बाराबारको आवस्था नै छ ?
भारतीय गायक कुमार सानुको स्वरमा नेपाली गीत
काठमाडौं, १८ बैशाख । थुप्रै चर्चित नेपाली गीतहरुमा स्वर दिएका प्रसिद्द भारतीय गायक कुमार सानुको स्वरमा ‘सयौं जुनी सँगै’ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
कलामा नेपाल र भारत
काठमाडौं, २८ चैत । कला मार्फत नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कलाकारहरुले प्रकाश पारिरहेका छन् । बौद्धस्थित तारागाउँ म्युजियममा जारी चित्रकला प्रदर्शनीले यति बेला नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रकाशलाई कलामार्फत देखाइरहेका छन् ।
होली वा वसन्त नवसस्येष्टि पर्व
होली पर्व आर्य वर्षको प्रमुख चाडपर्व मध्ये फाल्गुन मासको पूर्णिमामा पर्ने हिन्दूहरुको महान पर्व हो । होली अथवा वसन्त नवसस्येष्टि पूर्व वैदिककालदेखि चलिआएको आरोग्य, सौहार्द एवं उल्लासपूर्वक मनाइने महान चाड हो ।
डा. एल. सुब्रमण्यम तथा बलिउड गायिका कविता कृष्णमूर्तिको सांगीतिक कार्यक्रम
काठमाडौं, २६ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौंस्थित इन्डियन वुमन एसोसिएसनद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा विश्व प्रख्यात भायोलिन वादक डा. एल. सुब्रमण्यम तथा प्रसिद्ध बलिउड गायिका कविता कृष्णमूर्तिको सांगीतिक प्रस्तुति रहेको परोपकारी सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।